ဇာတာတွေကို ဖိုတိုရော့နဲ့ လုပ်ထားပေးတာပါ
အရောင် fonts ကာလာ ဒီဇိုင်း စုံလင်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်
Posted by soe naing win at Sunday, May 06, 20180comments
KP ဇာတာဖွဲ့ ဖို့ အကောင်းဆုံး လင့်
KP ဇာတာ မှာ အိန္ဒိယ တောင်ပိုင်း ဇာတာနဲ့ ပို အဆင်ပြေပါတယ်
ဘာဝတွေကို ပိုင်းခြားရာမှာ တောင်ပိုင်းဇာတာက ပိုကောင်းပါတယ်
အောက်ဖေါ်ပြပါ လင့်မှာ ၀င်ရောက် ဇာတာဖွဲ့လို့ ရပါတယ်
A4 PDF ဇာတာ ပေးပါတယ် နမူနာ တင်ပေးထားပါတယ်
ဇာတ်ဆောင်ဂြိုင် ဘာဝတွေ ပေးထားပါတယ် ဒသာလည်းပါတယ်
တမျက်နာနဲ့ အဆင်ပြေ ပါတယ်
KP နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာ ကိုအဆင့်မြင့်မြင့် လေ့လာလိုသူများအတွက် ဆရာဇွဲတင်ဝင်း၏ KP နက္ခဗေဒင်ပညာ အဆင့်မြင့်စာတန်းများကို နက္ခဗေဒင်ဝါသနာရှင် တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။ ဤစာအုပ်တွင်- ၁။ K-P အကြောင်း သိကောင်းစရာ ၂။ K-P ဂြိုဟ်ပရိယာယ် ၃။ K-P ဘာဝပရိယာယ် ၄။ K-P နက္ခတ် စီးပညာ အဆင့်(၄) သီအိုရီ ၅။K-P ဘာဝဘုတ္တိသခင် နှင့် ဘာဝအစုစပ်များအကြောင်း ပြည့်စုံစွာတင်ပြထာပါသည်။
Posted by soe naing win at Tuesday, July 15, 20140comments
Astro Badin Essays ဗေဒင်အက်ဆေးများ ဇွဲတင်ဝင်း @ Soe Naing Win
ဇွဲတင်ဝင်း (Author and Astrologer at Yangon, Burma)
ဝေဒမဂ်္ဂဇင်းတွင် ကလောင်အမည် ဇွဲတင်ဝင်းဖြစ်ခဲ့ပြီး လပြည့်
၀န်းနှင့် ဂန်္ဓာရီမဂ်္ဂဇင်းများ၌ ဇွဲတင်ဝင်း(K.P) ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ခရစ်နှစ်
၂၀၀၁ခု မေလတွင် ကျွန်ုပ်၏ (K.P) နက်္ခတ်ဗေဒင်ပညာ၊ အဆင့်
မြင့်စာတမ်းများ Astrosecrets စာအုပ်အဖြစ် စာအုပ်စင်ပေါ်ရောက်
ရှိလာသောအခါ ကလောင်သည် ဇွဲတင်ဝင်း (K.P) လုံးလုံးလျားလျား
ဖြစ်သွားတော့သည်။ ထိုပထမထုတ် စာအုပ်တွင် (K.P)နက်္ခတ်စီးနည်းကို
မိမိအာဘော်တချို့ နှင့် ပြန်ဆိုခြင်း ပေါင်းစပ်တင်ပြထားခဲ့သည်။
ဗေဒင်ကို ယုံလို့ရေးရေး၊ မယုံလို့ရေးရေး၊ စာရေးခြင်း အတတ်
ပညာသည် ကျွန်ုပ်၏မူလဘူတ ၀ါသနာပင်ဖြစ်သည်။ မူရင်းအာဘော်ကို
မိမိအာဘော် လုပ်သည့်နည်းတူ မိတ်ဆွေတို့၏ အာဘော်သို့မဟုတ်
ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်း ကျွန်ုပ်ကြိုဆိုလျှက် ရှိနေပါသည်။ ဗေဒင်အယူ
အဆဟူသည် ကိုင်တွယ်၍မရသော abstract အရာများနှင့် ဇာတာ၊ ကိန်း၊
အရုပ်၊ ကားချပ်၊ အစရှိသော badin ware များတည်ဆောက် ပြီး
မိမိ၏ရှုဒေါင့်မှ အာဘော်တင်ပြခြင်းသာဖြစ်သည်။ တူရှုနှင့် ရှုဒေါင့်
တူသော်လည်း အာဘော်ကွဲလွဲနိုင်သေးသည်။ များစွာပြောရခက်သော
ခံစားမှုဘာသာရပ်ဖြစ်၍ ယုံကြည်မှုများစွာ လိုအပ်ပါသည်။ ယုံကြည်ချင်
သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် ဘ၀ပုစ်္ဆာများကို အရိုးဆုံးတွက်နည်းဖြင့် အဖြေ
Posted by soe naing win at Wednesday, February 12, 20140comments
Thingyan Min is coming to the town
Myanmar astrologers mark new year in Tagu Month of myanmar calendar.this tagu month gets along with zodical sign Aries.So Myanmar new year day starts in sun ingress day to Sign Aries.Royal myanmar astrologers issued annual new year reports or mundane predictions on wide papers namely Thingyan Sar.
the pot marking the come of thingyan min
In those Thingyan Sar, astrologers predict Agricultural,Weather Forecasting,official holidays along with buddhish lent and full moon and new moon days.Myanmar Farmers believe on those thingyan sars .some Dos & Don’ts are written on this annual forecast.
The myanmar annual report mentioned 12 myanmar months with full moon days and new moon days.It also contained eclipses during the year.Most myanmar people buy thingyan sar to read when they need to do some social and economical things. so the thingyan sar become myanmar traditional year planner,We can also call thingyan sar ,myanmar farmers almanac.Myanmar farmers use thingyan sar to know date to plant and harvest during the year.
Some Red Letter Days are also mentioned in this myanmar almanac ,These are Myanmar Buddhist Days to celebrate especially Fullmoon Days of each months.Myanmar Calendar was of solunar months.There wasaleap year around3or4years in myanmar calendars.
this post was underfinish
Posted by soe naing win at Friday, August 10, 20120comments
Labels: myanmar farmers almanac, myanmar traditional year planner, thingyan min, thingyan sar
တခါက ရပ်ကွက်တခုတွင် အရပ်ဗေဒင်ဆရာက ရောက်ရှိလာသော မေးမြန်းသူကောင်မလေးတဦးအား သူမ၏ အိမ်ထောင်ရေးကို ဟောပြောဆွေးနွေးလေသည်။သူမသည် အိမ်ထောင်သည်တဦးနှင့်ချစ်ကြိုက်နေသည်ဟုရင်ဖွင့်၏။သူမ၏ချစ်သူပေါ်မလာသည်မှာ
ကြာမြင့်နေဘီဖြစ်ကြောင်း သို့အတွက်ပြုလုပ်ဖွယ်ယထြာပေးစေလို၏။ဆရာသမားက ကုတင်ခြေရင်းတွင်ဆေးဖယောင်းတိုင်တစ်တိုင်ညတိုင်းထွန်းညှိရန်မှာကြား၏။သို့ဖြစ် သူမသည် ဆရာအားကန်တော့ပြီး ၊အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ညစဉ် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းတော့လေသည်။ဆရာမသိသည်မှာ ထိုမိန်ခလေးသည် တရပ်ကွက်ထဲသားဖြစ်သည်။
တညသော် ဆရာတို့ရပ်ကွက်တွင်မီးလောင်တော့သည်၊မိုးလင်းမှမီးငြိမ်းသွားပြီးလူအများအပြားဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်စုဝေးလျှက်ယာယီဒုကသည်စခန်းဖွင့်လှစ်တော့သည်။ထိုစခန်းတွင် ထမင်းထုပ်ဝေသောအခါ ဗေဒင်မေးသွားသောကောင်မလေး အိမ်မှမီးစတင်လောင်ကြောင်းသိလိုက်ရလေသတည်း။
Posted by soe naing win at Sunday, September 18, 20110comments